पिडा सहन नसकेर रवि की पत्नीले गरिन देहत्याग « Etajakhabar
पिडा सहन नसकेर रवि की पत्नीले गरिन देहत्याग
काठमाडौं। श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा कुरा नमिल्दा रविकि श्रीमतीले देहत्याग गर्न पुगेकी छन् । घटना त्यही चितवनको हो । राजधानीसँगै जोडिएको एउटा गाउँ छ, धादिङको छेपाङ । त्यहीँको एउटा परिवारका सदस्य रवि रने सेढाइँ । उनी केही वर्षअघि मलेसिया गएका थिए । पत्नीले नारायणीको तीरमा विष पिएर आ त्मह त्या गरिन् । अहिले रवि रने भरतपुर कारागारमा कैदी छन् । मुद्दा हो, आ त्मह त्या दुरुत्साहनको ।
उनलाई छोडिदिनुप¥यो भन्न जाने नेकपाका नेताहरूलाई चितवनका तत्कालिन एसपी .(हाल सिआईबी) सुशीलसिंह राठौरले भनेका थिए, ‘हजुरहरूले जब कानुन नै यस्तो बनाइदिनुभएको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ ! कानुनमै त्रुटी छ हजुर !’ कानुन पश्चदर्शी हुँदैन, अर्थात् भविष्यलाई हेरेर कानुन बन्ने होइन । समसामयिक सामाजिक संरचना, समस्या र निराकरणलाई लक्ष्यित गरी कानुन निर्माण हुने हो । अर्थात्, भविष्यमा कोही व्यक्तिले केही गर्ला र सेकौंला भनेर कानुन बनेको हुँदैन ।
रवि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गए । मेहनतको मूल्य पत्नीलाई पठाइरहे । फर्किएर आउँदा रित्तै । आमाबाबुले पो खर्च गर्थे कि भनेर चितवन भण्डारा पिप्लेमा बसाइँ सरे । आफूले पठाएको रकमबारे पत्नीलाई सोधे, खोजे, जवाफ पाएनन् । अर्को सूचना आइलाग्यो । अनि फेरि पत्नीलाई सोधे, ‘म विदेशमा हुँदा, तिमी त पिल्स खान्थ्यौ रे नि नानु ?’ त्यही कुराले पीडा भएर नारायणीको तीरमा पत्नीले आ त्मह त्या गरिन् । कुरा सामान्य हो– पतिले पत्नीलाई मनमा लागेको आशंका सोध्नु । उनलाई म र्न जाऊ भनेको त होइन । तर, रवि चैतदेखि आ त्मह त्या दुरुत्साहन मुद्दाको पुर्पक्षअन्तर्गत कारागारमा छन् ।
यही कानुनको कारण धादिङका सांसद भूमि त्रिपाठीमाथि अर्को तनाव छ । नुवाकोटका २२ वर्षीय समिर श्रेष्ठ २२ दिनको प्रहरी हिरासतबाट अस्ति सोमबारदेखि धादिङ जिल्ला कारागार चलान भएका छन् । मुद्दा उही हो, आ त्मह त्या दुरुत्साहनको । धादिङबेसी बजार, नीलकण्ठ नगरपालिकाको पुछारमा बस्ने लक्ष्मी श्रेष्ठसँग फेसबुकमार्फत चिनाजानी भयो । नुवाकोट बस्ने बाबुआमाले फेसबुकमा चिनेको कहाँ हुन्छ, केटी हेरौँ भने । केटीले जान मानिनन् बरु एकदिन एक हातमा वि ष, अर्को हातमा मोबाइल बोकेर ‘मलाई भेट्न आउने भए आऊ, नत्र म र्छु’ भनिन् । केटाले ‘म रे म र’ भनेर म्यासेज लेखे । युवतीले वि ष निलिन् । त्यही म्यासेजलाई प्रमाण मानेर अस्ति भदौ १६ गते धादिङ जिल्ला अदालतका श्रीमान् देवेन्द्र पौडेलले (घर झापा) युवकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएका छन् ।जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।
कानुनहरू कसैलाई लाग्ने, कसैलाई नलाग्ने हुँदैन । कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसले छुँदा निरपेक्ष रुपमा छुनुपर्छ । आ त्मह त्याको परिस्थिति कसले सिर्जना ग¥यो, उक्साहट, दबाब र परिस्थिति सिर्जना, अर्थात् प्रभाव छ कि छैन ? यो बुझ्नुपर्छ । आ त्मह त्याको कारण र घटनाको सामाञ्जस्यता छ कि छैन भनेर पनि पहिचान हुनु जरुरी छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ आउनुअघि यस्तो व्यवस्था नै थिएन । वास्तविक समस्या हो, तराईको । दाइजो नल्याएबापत बुहारीहरू मर्न थाले । सासू, आमाजू, नन्दहरूले घर भित्रिएकी नयाँ बुहारीलाई ‘तँ मर्, छोराले अर्कीे ल्याउँछ । कि दाइजो ल्या’ भन्ने गरेपछि ठूलो सामाजिक समस्या खडा भयो । कोही आगोमा ज लेर, कोही पा सो लागेर, कोही खोलामा हा म्फालेरदेखि अनेक प्रकारका आ त्मह त्या हुन थाले । घरेलु हिंसाका कारण हुने आ त्मह त्यामा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति पनि दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मनशाय कानुनको थियो । अर्को पनि अवस्था छ– प्रेमी–प्रेमिकाले सँगै म रौँ भन्ने, एउटाले चलाखीपूर्वक बि ष पिए जस्तो गर्ने र अर्को बाँच्ने । कपट वा मा र्ने मनशायका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
दक्षिण एशियामा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकापछि आ त्मह त्या दुरुत्साहन मुद्दाको व्यवस्था नेपालमा भएको हो । बेलायतको सिभिल कोडअन्तर्गत यस्ता कानुनहरू त्यहाँ बनेका हुन् । ती देश बेलायतको उपनिवेश भएका बेला जारी भएका थिए । भारतमा त आ त्मह त्यालाई नै कसुर मान्ने प्रचलन छ । आ त्मह त्याको क्रममा कोही बाँचेर आए पनि मुद्दा चल्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादु्र कार्की नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको मस्यौदामा यो कुरा थियो । तर, कानुन बनेर आउँदा काट्कुटमा प¥यो र दुरुत्साहनबापत कारवाहीको प्रावधानमात्र हालियो ।
यो पनि पढ्नुहोस : विप्लवका छोरा पक्राउ
चितवन मेडिकल कलेजमा सेवा अवरुद्ध गराउन खोजेको भन्दै त्यहाँ अध्ययनरत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का छोरा प्रकाश चन्दसहित १५ विद्यार्थीलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लका अनुसार अस्पतालको सेवा अवरुद्ध गराउँदै तोडफोड गर्ने प्रयास गरेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुले विगत एक सातायता विभिन्न व्यक्तिलाई तल्लो स्तरको गालि गलौज गरी आन्दोलन गर्दै आएको मल्लले बताउनुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस : चितवनमा पर्यटक बढाएर बसाइँ लम्ब्याउन गृहकार्य
समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार सरोकारवालाको सहभागितामा ७१ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सोही समितिबाट तीन उपसमिति गठन गरिएको छ । चितवन उद्योग सङ्घले नेतृत्व गर्ने गरी आर्थिक उपसमिति, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले नेतृत्व गर्ने गरी बुकलेट तथा भ्रमण वर्ष क्यालेन्डर प्रकाशन उपसमिति, जिल्ला पर्यटन विकास समितिले नेतृत्व गर्ने गरी प्रचारप्रसार उपसमिति गठन गरिएको डल्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो । ती उपसमितिमा सरोकारवाला विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् ।
राजधानीमा हुन लागेको गैरआवासीय नेपाली महासङ्घ (एनआरएन) को सम्मेलनमा यहाँका बुकलेट, क्यालेन्डर जस्ता सामग्री वितरण गरी सम्बन्धित देशसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखिएको डल्लाकोटीको भनाइ थियो । जिल्लामा परिवार रहेका विदेशमा बस्नेलाई समेत भ्रमण वर्षमा आफू र आफूले चिनेका त्यहाँका बासिन्दालाई भित्र्याउने गरी प्रचारप्रसार गर्न लागिएको छ ।
४ आश्विन २०७७, आईतवार ०७:२४